China Rotary Ultrasonic ịgbado ọkụ igwe kọmpat Ultrasonic Seam ịgbado ọkụ igwe ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Ike
ihe ntụgharị ultrasonic ...
Rotary Ultrasonic ịgbado ọkụ igwe kọmpat Ultrasonic Seam Welding Machine
Mpi: Nchara / titaniu
35Khz ultrasonic rotary ịgbado ọkụ akụrụngwa maka ultrasonic seaming
Ezubere mpi rotary ultrasonic nke 35Khz maka ịgbado ọkụ ultrasonic.
ltrasonic si nwere ike ji mee ihe maka a dịgasị iche iche nke mmadụ mere akwa na plastik, na eke akwa nwekwara ike-eji na a kacha nta ọdịnaya of ọbụlagodi 60% thermoplastic.
Ihe eji eme ihe maka akaraịbanye na ịcha akpa akpa na-enweghị eriri mkpịsị ụkwụ ka uwe na-acha uhie uhie na akwa egwuregwu na-esonye na eriri Velcro yana wdg.Ọ bụ ezie na ọdịdị na ọrụ nke igwe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ, SeamMaster High Profile bonder nwere nnwepụta dị elu n'etiti wiilị na mpi ahụ, na-eme ka ọ dị mma maka ngwa a na-eduzi aka na njigide siri ike, ma ọ bụ mgbe ị na-arụ ọrụ gburugburu.
Igwe eji eji igwe eji arụ ọrụ nwere igwe eji arụ ọrụ nke ọma ma dịkwa mfe iji rụọ ọrụ, ịkpụ, gbajie, kwụcha, kpụọ, emboss, ma ọ bụ igbutu ma mechie n'otu oge ahụ. Usoro nke igwe eji akwa ultrasonic ọ bụla dị ngwa, dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
N'ezie ọ bụ teknụzụ na-agbanwe agbanwe. N'ihi mgbanwe nke atụmatụ ya, ọ ga-ekwe omume ịrịgo igwe ejiji akwa na tebụl ọrụ ma ọ bụ wụnye ya n'ime sistemụ ọkara ma ọ bụ zuru ezu.
Ike 8 00W
Njupụta nke ịma jijiji (a) 15 ~ 25 µm
Ngwaọrụ ígwè / titanium
Weld obosara 7mm na max
Ultrasonic ịkwa akwa igwe ngwa:
Anyị ultrasonic ịgbado ọkụ igwe na-ọma na-emegharị maka anam-elu arụmọrụ dị iche iche ngwa dị ka: anyanwụ nchebe ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ arụmọrụ gị oru textiles ma ọ bụ nonwovens. N'ikpeazụ, ngwa ọrụ a dị iche iche na nke kwụ ọtọ ga-enyere gị aka ịme usoro akara dị iche iche.*Nkà na ụzụ Ultrasonicenwere ike iji ya naanị na akwa sịntetik (nke opekata mpe nke sịntetik), thermoplastics ma ọ bụ ngwaahịa thermo-fusible ọ bụla. Iji jide n'aka, egbula oge ịkpọtụrụ anyị maka ọnwụnwa ultrasonic ma ọ bụ ịgbado ọkụ.
Iji igwe ejiji igwe ultrasonic weputa usoro nke uru:
Akpa ákwà ngwa ngwa ma dịkwa ọnụ ahịa;
Ebili mmiri na-agbanwe agbanwe;
Enweghị mkpa maka ihe oriri dịka teepu, obere vidiyo ma ọ bụ gluu;
Nsonaazụ mgbe niile;
Enweghị oge jụrụ ma belata ụgwọ ọrụ;
Ọ dịghị oge égbè maka stapler ngwá ọrụ;
Edging ke kiet ke otu ọrụ
Ọ dịghị mkpa maka agịga, eri, spools na ihe omume ọ bụla metụtara ịhakọ agba, ngwongwo, winding na trimming;
Gburugburu-enyi na enyi n'ihi na ọ dịghị mkpa ọ bụla nrapado na solvents;
Edges na-ekpuchi akara na-ahapụghị oghere ọ bụla, si otú a na-egbochi ịbanye na ndị ọrụ kemịkal, nje na-akpata ọbara na ihe ndị ọzọ.
Nke gara aga: 2020 High quality Ultrasonic Welding Generator Circuit - 2600w 20khz Akwa Ike Ultrasonic Generator akpaka nsuso - Powersonic
Osote: 20khz Ultrasonic PCB Board nke Digital Ultrasonic Generator Driver Circuit Board
High Ike 20Khz Ultrasonic ịgbado ọkụ System f ...
Steel Horn Ultrasonic ịgbado ọkụ Ngwá Ọrụ kọmpat Ultr ...
15khz elu kpọmkwem ultrasonic welder & T ...
35Khz 800w Ultrasonic akara Equipment Rotary ...
Ntị Loop Ultrasonic ịgbado ọkụ Ngwá Ọrụ 20khz 2000w
20Khz elu na-agba Ultrasonic nkpuchi igwe maka Di ...